Lapho kuqala entwasahlobo abalimi ekubeni abanqotshwa umsebenzi futhi akumangalisi lokhu: kubalulekile ukuba alime nasezweni, futhi ukulungiselela imibhede kanye ukubhekana imbewu. Ukuze uthole isivuno esihle, kudingeka usebenzele ukuba uhambe kahle, futhi sonke isizini. Lapha Ukugunda ezifika engqondweni isaga esidala Russian: "Njengoba okuhlwanyelayo, kuyakuba uvuna."
Yeka isivuno ngaphandle isanqante? Juicy, ezinoshukela, kanye main ngqo futhi ezinkulu izithelo - iphupho zonke wensimu. Yilokho nje akubona bonke uthole sikhule isanqante. Mhlawumbe hhayi nje bamabanga imbewu? Ake sizame ukuthola lapho ukuhlwanyela izaqathe kanye nendlela bawunakekele, ukuba namawashi ahlekisayo yemifino idili sokuvuna ocebile.
"Yiqiniso, kufanele itshalwe entwasahlobo," - ukuwuphendula, futhi ngeke kahle. Nakuba isikhathi ukutshala imifino engadini mayelana efanayo, imifino efana izaqathe, lo mthetho awusebenzi. Kukhona zakuqala-ukukhula, maphakathi no-isizini futhi ngasekupheleni izinhlobonhlobo izaqathi. I lokuqala nelesibili etshalwa ukudla ehlobo, kanti owokugcina uyoba ngo - ukugcina ebusika. ukutshala izinsuku nabo, yebo, ezahlukene.
izaqathe Early ngokuvamile itshalwe ekwindla, kungakangeni ubusika, kahle, noma okubi kakhulu, ngo-Ephreli, ngokushesha nje lapho iqhwa liyancibilika futhi phansi thaws kancane. Orange yemifino frost futhi kalula ukubekezelela ukwehla kwamazinga okushisa kuya -3 degrees.
Lapho ukuhlwanyela izaqathe maphakathi no-isizini, wena kuzosenza aspen: uphawu kazwelonke uthi ngesikhathi zezimbali sikhathi isihlahla yemifino utshale.
Nokho, lapho ukuhlwanyela izaqathe kamuva, ingayala ikhalenda kwenyanga. ngokuvamile Lokhu kwenzeka ngasekuqaleni kuka-Juni, nakuba kungaba ukulinda kancane kuze kube maphakathi lwenyanga. Khona-ke yemifino wayengeke kahle amanga emiphongolweni kuze entwasahlobo.
Ngakho, lapho ukuhlwanyela izaqathe siqonda, manje sidinga ukukhuluma kancane mayelana kukhethwa indawo ngoba yemifino kwendle.
Uma croft yakho iseningizimu esigodini, kufanele ucabange mayelana okusezingeni eliphezulu imibhede ngobuningi of izaqathe, ngoba akakubekezeleli umswakama ngokweqile, ngisho uthanda ukuthambisa njalo. Libuye endaweni ukuba libalele njengoba neze ukuthuthukisa emthunzini nezilimo eziyizigaxa. kokumethemba Okuhle Ngomsebenzi izaqathe uthathwa ikhukhamba, utamatisi, u-anyanisi, zucchini, amazambane. Okungukuthi, it ukhetha umquba ocebile, inhlabathi evundile. Nokho, izaqathe awukwazi ukubekezelela umquba fresh. Kungcono ukusebenzisa Umanyolo phakathi nonyaka impande zokutshala. Nokho, uma indlela yokwakheka inhlabathi kukhona isihlabathi,
ngoba izaqathe uthanda umhlaba okuxekethile ukukhanya.
Imbewu impande izitshalo ziqhume kabi kakhulu, ngoba iqukethe ukubunjwa yayo inqwaba amafutha abalulekile. Lokhu kwenza kube nzima ukuthola zingabi manzi. Ngakho-ke, ngaphambi kokutshala imbewu emhlabathini kufanele uzilungiselele. Okokuqala, simanzi té izinsuku eziningana, ukushintsha amanzi 2-3 izikhathi. Kungaba kuhle ngisho lungadambisa imbewu bephonsa nabo amanzi yanjalo ashisayo nabandayo, kodwa kubalulekile ukuba ligcine esiqinile lokushisa isilawuli, engesiyo ukhululekile kakhulu ezimweni ehlobo. Kukhona enye indlela ethandwayo: ukubeka imbewu esikhwameni lelineni uwugqibe ngesonto ngaphambi zitshala ukuba ukushona ok insabule. Ngaphambi ayihlwanyelayo control, pholisa futhi kancane nomhlaba at ibanga 1.5 cm kusuka komunye nomunye, okwenza imisele 10-15 cm.
Sithemba lawa mathiphu alula kuzokusiza ukwandisa umkhiqizo we-impande orange.
Izibonelo nezihlahla Ornamental futhi herbaceous bok
"Bere Bosc 'eliphakathi kwe: incazelo, izici, betshala nokunakekela
I-crystal enemibala - ubusuku obusikhalini
Lihle izibhamu, nakho konke odinga ukukwazi mayelana nabo
Izinhlobonhlobo imvelo Samara futhi Chelyabinsk izifunda
Film umqondisi Georgy Paradjanov - owokugcina uhlobo